Ukuhlaziywa kwe-Semalt - I-Tool Effective Scraping Web Tool
I-Web scraping yinkqubo ethembekileyo kwaye ithandwayo kubasebenzisi beewebhu kunye neenkampani, zama ukukhipha ulwazi oluninzi kwi-intanethi kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo kwi-Intanethi. Namhlanje umthombo obalulekileyo kakhulu wolwazi yi-intanethi, kwaye abaninzi abaphandi bewebhu basebenzise imihla ngemihla. I-Python yilwimi elithandwayo kakhulu nolunempumelelo. Kulula ukuyisebenzisa, kwaye abaninzi abaphengululi bewebhu bayayithanda ukuba baphathe imisebenzi esheshayo. Ngokomzekelo, ukuba bafuna ukukhangela uluhlu, amanani, iimveliso, iinkonzo kunye nedatha, bayayisebenzisa. Enyanisweni, iPython inikeza abasebenzisi bayo izixhobo ezimangalisayo kule mi sebenzi.
Iinzuzo zokusebenzisa i-Python
Ukuzalisekisa imisebenzi yabo, abaphandi bewebhu baxhamla ilayibrari yePython, ebenza ukuba baqhube iiprojekthi ngokukhawuleza kwaye kulula. Enyanisweni, unikeza abasebenzisi bayo iindlela ezilula zokufuna, ukufumana nokuguqula idatha yabo eqokelelweyo kwiifayile ezithile kwiikhomputha zabo.
Abasebenzisi balo banokufumana kalula idatha yenkcazelo yangempela abayifunayo kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo kwiwebhu. Ngaphezu koko, unikezela abasebenzisi bayo ukhetho lokucwangcisa iprojekthi yabo ukuba iqhutywe ngexesha elithile ngosuku. Ikwabonelela ngeenkonzo zokuhambisa iinkcukacha.
Ukufunda ukukhangela iilayibrari zePython kuwumsebenzi olula, owanikezela abasebenzisi bawo ngendlela emangalisayo kunye efanelekileyo yokuphucula ukusebenza kwishishini labo.Ngokwenza njalo, abasebenzisi banokuqonda ngokucacileyo ukuba ezi zikhokelo zewebhu zisebenza njani. Ngokomzekelo, ukuya kwi-25 (scrape website) , kufuneka ukuba bakwazi 'ukuthetha' ngewebhu (HTTP), ngokusebenzisa izicelo (ilayibrari yePython). Emva koko, banokufumana yonke idatha, kwaye kufuneka bakhuphe kwi-HTML (ngokusebenzisa i-LXML okanye iSobho Sokuhle)
Ilayibrari ye-python ijolise ukwenza iwebhu ukukhangela umsebenzi olula kubasebenzisi bewebhu. Ukuba yonke idatha engafanelekanga kwaye ibakhuphe ngaphandle kwaye inikele abasebenzisi bayo. Inika ezinye iipropati ezinkulu, ezinika amagama e-HTML amagama, ukwenza kube lula kubasebenzisi. I-Python yiprogram enkulu, eyenzelwe ngokukodwa iiprojekthi ezifana ne-web scraping. Ibonelela iindlela ezithile ezilula kubasebenzisi bayo ukuguqula umthi we-parse. Ngokwenene le nkqubo yeelwimi iphuhliswe phezulu kwezona zinto zihamba phambili zePython, njengeLXML kwaye iguquguquke. Enyanisweni, uyifumana idatha edityiweyo kwaye iqokelela yonke ingcaciso ebalulekileyo i-web scrapers kwiminithi. Ngokukodwa, ilayibrari yeLxml ivumela abasebenzisi bayo ukuba benze isakhiwo somthi ngokusebenzisa i-XPath. Ngenxa yoko, bayakwazi ukuchaza ngokucacileyo indlela eya kwinto equlethe ulwazi oluthile. Umzekelo, ukuba abasebenzisi bafuna ukukhupha izihloko ezivela kwiwebhsayithi, kufuneka bafumane okokuqala ngoluhlobo luni lwe-HTML oluhlala kuyo kwaye lukhuphe idatha Source .